Imveliso ye-K-Tek Machining ibonelela ngeenkonzo ze-OEM / i-ODM ezivela kwifektri yethu yokuchaneka esekwe eDongguang, China. Sinikezela ngomgangatho ophezulu wokuchaneka kwamacandelo kumashishini amaninzi, iimveliso ezinxulumene noomatshini, i-elektroniki, oomatshini abazisebenzelayo, izithuthi, ezonyango, amandla amatsha kunye nezinye iinkalo. Singazenza nawaphi na amalungu ngokuhambelana neemfuno zakho.
Ukugxila kwimveliso ekumgangatho ophezulu CNC ukujika kwe-axis kunye nokugaya, sinokubonelela ngenkonzo yokugaya i-axis epheleleyo kunye nenkonzo yokujika. Siye zamkela izibonelelo machining CNC yakutshanje kumatshini kunye nokuveliswa izakhi ngqo. Amacandelo anokuveliswa kwizinto ezininzi: Insimbi engenasici, iAluminiyam, Brass kunye nezinye izinto zentsimbi.
I-K-Tek inokubonelela ngeprototype kunye neenkonzo zekhontrakthi zemishini ye-CNC. Sinako ukuvelisa ngezinto ekrwada aluminiyamu ingxubevange, ubhedu, intsimbi engatyiwa, intsimbi wobulali, zinc ingxubevange, PMMA, Teflon njl izakhono zethu zibandakanya single & multi yokuluka oluzenzekelayo machining, CNC machining (ukujika, wokugaya), EDM, ukukroba, ukugaya, ukubhola , ukusika izixhobo, ukunyanga ubushushu, ukugoba, ukufaka umsonto, ukusonga, ukujija umsonto njl.
• Izixhobo: I-3 axis cnc Machining, i-4 axis cnc Machining, i-5 axis cnc Machining, oomatshini abaqhelekileyo, i-WEDM-LS, i-Mirror EDM, i-Internal / yangaphandle ye-Grinder, i-Laser Cutting, i-3D CMM, i-Height Gauge kunye ne-Material Analyzer njl.
• Ukugqibezela uluhlu lwezakhono, Izivumelwano zonikezelo lwexesha elide.
Ixesha lokuguquguquka lomsebenzi, Inkxaso yobunjineli, i-ISO 9001: 2015 eqinisekisiweyo.
Okwangoku sinabasebenzi abangama-200. Imveliso yethu malunga neepesenti ezingama-20 zithunyelwa eJapan, i-60% ithunyelwe ngaphandle eYurophu naseMelika, sinokukunika umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokukhuphisana.
1) 5 Axis CNC Machining / CNC Milling / CNC Ivula;
2) I-EDM yocingo lokusika / i-WEDM-HS / i-WEDM-LS;